Yusuf Garaad: Tirada Maxaabbiista Labada Dhinac - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Toddoba iyo Tobnaad
Tirada Maxaabbiista Labada Dhinac - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Toddoba iyo Tobnaad
Soomaaliya gudaheeda maxaabbiista Ethiopian-ka ah waxaa lagu hayay afar goobood oo ay ka mid ahaayeen Xabsiga Dhexe ee Xamar, Dhanaane iyo Laanta Buur.
ICRC waxaa loo oggolaa saddex xabsi oo ay ku arki jirtay isu geyn 266 maxbuus oo Ethiopian ah iyo duuliye Cuba u dhashay oo isagana dagaalka lagu soo qabtay. Markii ay labada Dowladood heshiiyeen, Soomaaliya waxay ka aqbashay ICRC in ay iyadu fuliso howgalka kala beddelaadda maxaabbiista.
Markaa waxaa ICRC loo oggolaaday in ay booqato saddexxdii xabsi ee ay hore u tegi jirtay iyo mid afraad oo hor leh. Xabsiga afraad waxay ICRC ku soo aragtay oo ay liis gareysay 2,659 maxbuus oo Ethiopian ah. Waxay u badan tahay in ku dhowaad 11 sano oo ay xirnaayeen maxaabbiistaasi ay ahayd markii ugu horreysay ee ay arkaan cid ka baxsan Soomaalidii gacanta ku haysay.
Mas’uuliyiinta Soomaaliya waxay ICRC tuseen isu geyn in ka badan 3,500 oo maxbuus oo Ethiopian ah mid ka mid ahi waxay ahayd gabar Soomaali ah oo aan gooni uga warrami doono.
Bishii Luulyo waxay ICRC dib isugu soo celisay xubnaha 300 oo qoys oo Ethiopian ah oo ku kala xirnaa xabsiyo kala duwan oo Soomaaliya gudaheeda ah.
Sida hooyo iyo wiilkeed xusuus weyn igu reebay oo ka mid ahaa dadkii aan dhoofinnay.
Waxay ahayd hooyo Ethiopian ah oo maalmiheedii ugu dambeeyay Soomaaliya, xanuun dartiis taallay Isbitaal Banaadir. Xilli salaadda subax la addimayo ayaan ka soo qaaday Isbitaalka oo aan geeyay Airporka maaddaama ay subaaxaas ku qornayd duullimaadka ugu horreeya ee geynaya Dire Dawa.
Waa ay iska wanaagsanayd. In markii aan airporka joognay oo aan howl kale ku jiray ayaan goor dambe arkay iyada oo ooyaysa. Waan ka naxay. Maaddaama aynaan is af aqoon, waxaan sababta ooyinta weydiiyay qaar la joogay. Waxaa la ii sheegay in ay aragtay wiilkeeda oo xabsi laga soo saaray.
Maaddaamada ay maxaabbiista Ethiopian-ku aad u tiro badnaayeen isla markaasna ay xabsiyo kala duwan ku jireen waxay ICRC qabanqaabisay xarun geshiin ah ama ku meel gaar. Dowladda Soomaaliya waxay xaruntaas ka dhigtay Ceel Jaalle, oo ka titsan magaalada Marka. Waa degaan aad u qurux badan. Waa meel kacsan oo dhinacna ay xigto buur bacaad ah dhinaca kalena badda. Waa muuqaal aad u qurux badan siiba marka qorraxdo ay soo baxayso iyo galab-gaabkii ilaa qorrax dhaca.
Sarkaal ajnebi ah iyo aniga ayaa naloo diray in aan soo aragno goobta. Waxaan soo hubinney qolalka jiifka, kushiinka iyo meesha wax lagu cuno, xafiisyada iyo musqulaha.
Waxaan xusuustaa soo laabadkii in aan sarkaalkaas aan wada shaqeyneynay oo dalka ku cusbaa aan soo marsiiyay waddo ka duwan middii aan Marka ku tagnay.
Waxaan u weeciyay dhinaca Jannaale aniga oo sii marsiiyay, beerta Adan Cadde, tuulada Mushaanni oo aan booqannay beerta Cabdalla Mushaanni iyo aakhirkii Jannaale. Waxaan xusuustaa in uu igu xanaaqay. Wuxuu yiri halkaani waa Yurub oo kale. Inta aynaan Muqdisho ka soo bixin maxaad iigu sheegi weyday in aan dhul noocaan ah tegeyno? Waxaan weydiiyay waxa uu sameyn lahaa. Wuxuu yiri qalab ayaan soo qaadan lahaa Madaxa Xafiiskana waxaan nooga soo qaadi lahaa fasax in aan caawa halkaan ku hoyanno.
Ma ogeyn waxa uu ula jeedo halkani waa Yurub. Waayo anigu markaa Yurub ma aqoon. Markii aan Yurub tegey kuna wareegay ayaan arkay in meelo badan ay ku leedahay dhul beereed iyo dhir aad u waaweyn. Geedaheedu aad ayay u jirrid weyn yihiin sida geedo aan ku arkay Jannaale, Jamaame iyo Mareerreey.
Sannadkii 1988, intii ud dhexeysay bilihii Jannaayo ilaa Agoosto, ICRC waxay booqatay saddex goobood oo dalka Ethiopia ah oo isu geyn ay ku soo aragtay 238 maxbuus oo Soomaali ah.
18-kii Agoosto ayay Dowladda Ethiopia u fasaxday ICRC in ay maxaabbiistaas u qaaddo dalkooda. Dowladda Ethiopia waxaa kale oo ay ICRC u fasaxday in ay mid mid u weydiiso maxaabbiista oo ay hubiso in uu doonayo in uu ku laabto dalkiisa.
Ka hor inta aan maxaabbiista la soo qaadin, ayaa booqashadii ugu dambeysay waxay ICRC ku tagtay xabsiga Dire Dawa ee lagu hayay maxaabbiista Soomaalida. Laba maalmood oo keliya ayaa ka harsanayd billowga daadgureynta iyo kala beddelaadda maxaabbiista.
16 maxbuus oo Soomaali ah oo hor leh oo aan ICRC weligeed arag ayay Ethiopian-ku keeneen.
Tirada guud ee maxaabbiista Soomaalidu waxay sidaa ku noqotay 254.
Posted by Yusuf Garaad at 17:24:00